Muqdisho: Nicholas Kay oo kulamo la qaatay Madaxda Federaalka Soomaaliya. | Somaliland Today
← Saddex aan isla jaan qaadayn (qabyaalad, qaad iyo siyaasad) Cabdicasiis Ibraahin Ciise (Daacad)
Daraasad Lagu Sameeyey Dhaqaalaha Wadanka Shiinaha, Warbixin →
Muqdisho: Nicholas Kay oo kulamo la qaatay Madaxda Federaalka Soomaaliya.
(SLT-Muqdisho) – Ergeyga Qaramada Midoobey u qaabilsan Soomaaliya Nicholas Kay ayaa maanta kulamo gaar gaar ah la qaatay Madaxda dowladda Soomaaliya, isagoo kala hadlay arrinta khilaafka adag ee soo kala dhex galay Madaxweynaha iyo Ra’iisul Wasaaraha.
Nicholas Kay ayaa ugu horeyn u tagay Gudoomiyaha Baarlamaanka Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari, waxaana kulan albaabada uu u xirnaa saacadana qaatay uu la yeeshay, iyadii Mr Kay uu ku wehliyay La Taliyihiisa gaarka ah Mr Nuuradiin Diiriye.
Ilo wareedyo muhiim ah ayaa u xaqiijiyay Jowhar.com in Mr Nicolas Kay uu ka dalbaday Gudoomiye Jawaari in arrinta khilaafka sulux lagu dhameeyo, isla markaana ay qeyb ka noqoto Beesha Caalamka, hase ahaatee Gudoomiye Jawaari uu ku wargeliyay in arrinta loo daayo Hey’adaha dastuuriga dowladda, ayna go’aan ka gaari doonaan, bedelkii ay soo fara gelin layeen Beesha Caalamka.
Sidoo kale Nicolas Kay ayaa kulan la qaatay Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya, inkastoo ay adag tahay in xog rasmi ah laga helo, hadana warar qaar ayaa sheegaya in Ra’iisul Wasaaruhu ku adkeystay inuu xaq u leeyahay inuu Golihiisa Wasiirada isku shaandheeyo, taasna awood uu u siinayo Dastuurka.
Nicholas Kay ayaa ugu dambeyn galabta la kulmay Madaxweyne Xasan Sheekh, waxaana ay isla soo qaadeen go’aankii uu kaga soo hor-jeestay, waxaana Mr Kay uu u sheegay Madaxweynaha in khilaafka isaga iyo Ra’iisul Wasaaraha ay curyaamin karto hey’adaha dowladda, caqabadna ay ku keeni karto geeddi socodka Hiigsiga cusub ee sanadka 2016 la doonayo in dalka doorasho uga dhacaan.
Danjire Nicholas Kay, la taliyihiisa Nuuradiin Diiriye iyo Prof. Jawaari
Wariyaha Jowhar.com ayaa sheegaya in Madaxweynaha uu ku adkeystay go’aankii uu kaga soo horjeestay isku shaandheynta, isla markaana marar badan uu u dulqaatay tallaabooyinka Ra’iisul Wasaaraha. Madaxweynaha ayaa sheegay in isaga aanu diidaneyn isku shaandheyn lagu sameeyo Xukuumada, balse xilliga la sameeyay, deg degta ku jirta iyo sida shaqsiyaad gaar ah loo beegsaday ay caqabad ku noqoneyso barnaamijka dowladdnimo iyo howlihii soo socday.
Dhinaca kale Wakiilka Midowga Afrika u qaabilsan Soomaaliya ayaa sidoo kale kulamo la kala qaatay Madaxweynaha iyo Ra’iisul Wasaaraha, iyadoo wakiilku uu kulankiisa ku horeeyay Ra’iisul Wasaaraha.
Lama oga halka ay ku dambeyn doonto khilaafka siyaasadeed ee soo kala dhex galay Madaxweynaha iyo Ra’iisul Wasaaraha, iyadoo la saadaalinayo in laga yaabo in Baarlamaanka ay u gudubto, si loogu kala baxo.